၇ သိန်းဝန်းကျင် ကျသင့်မယ့် Black Shark3ကို ကြေညာလိုက်ပြီ
မထွက်ခင်တုန်းက QHD+ Resolution မှာ 120Hz Refresh Rate နဲ့လာမယ်လို့ ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ Black Shark3အခု တရားကြေညာလိုက်တဲ့အခါ ဘာတွေကွာသွားပြီလဲ? High-end (S20 Series) တွေချည်း ထွက်နေချိန် ငါသာမင်းလောင်း၊ ထီးဖြူဆောင်း နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်နေမလား လေ့လာကြည့်တာပေါ့။
ဒီဇိုင်းကနေပဲ သုံးသပ်ကြည့်တာပေါ့၊ ကျနော့် Personal Feeling အရ Black Shark3ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ဂိမ်းမင်းဖုန်း မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ယူထားတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
အရင်မော်ဒယ်နဲ့ သိပ်မကွာဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် ကင်မရာ ၃ လုံး Centre ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ အောက်ဖက် Shark (S) Logo နဲ့ Tencent Logo ထားတဲ့ Position တွေက ဂိမ်းမင်းဆိုတာ ပေါ်လွင်စေတယ်။
အစိမ်းရောင် Green Essence သုံးတာ အမြင်အားဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသလို Pro အလုံး ထူးခြားချက်တစ်ခုက Air Sensitive Pop-up ခလုတ်အစား Physical Pop-up Buttons တွေနဲ့ အားဖြည့်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
So-called 90Hz Display
ကယ်..120Hz ရမယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ? ခုပြောနေလဲ မထူးတော့ဘူးဆိုတော့ 90Hz က Smooth Gameplay အတွက် အားသာချက်တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်တယ်။
ဒါမယ့် ပြိုင်ဖက် ROG Phone2ဒုတိယ QHD+ (2560 x 1440) Resolution မှာ 120Hz ပြေးနေတဲ့ Razer Phone2တို့ကို Technically မမီသေးဘူး (လုံးဝမမီသေးဘူးလို့ ပြောချင်ပြောနိုင်တယ်)
Black Shark3Duo
Pro အလုံးက 7.1” Display နဲ့ ထွက်ရှိလာမယ်၊ Resolution အတိကျ မသိရသေးပေမယ့် QHD+ (3120 x 1440) Resolution မှာပဲ 90Hz Refresh Rate နဲ့ Run မယ်
Xiaomi ကတော့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဆိုထားတဲ့ 270Hz Touch-sensing Rate ထည့်သွင်းထားတယ် ဆိုပါတယ်။ Pro မဟုတ်တဲ့အလုံးက 6.67” FHD+ Resolution သုံးထားတယ်။ မော်ဒယ် ၂ မျိုးစလုံးမှာ MEMC Chip သုံးထားပြီး 90fps တင်ပေးနိုင်မယ်၊ 24 Milliseconds Low Latency ရှိတယ်လို့လည်း Claim ထားပါတယ်။
Quality ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ Gimmick အပြောခံရအောင် 105% DCI-P3 ထောက်ပံ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Black Shark3မှာ Improve ဖြစ်လာတာ Thermal Solution လို့ ပြောနိုင်သလို ကျွမ်းကျင်သူတွေ အဆိုရ အရှေ့ ၊ အနောက် Display ၊ ကိုယ်ထည်နေရာတွေမှာ Holes ၊ Cut-outs လုပ်ထားတဲ့ နေရာမရှိဘူး၊ အပူစွန့်ထုတ်ဖို့ ပိုအဆင်ပြေသွားသလို Black Shark2စီးရီးတွေထက် Cooling ပိုင်း ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ထောက်ပြထားပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာ ကောလာဟလ ထွက်ထားတဲ့တိုင်း Snapdragon 865 SoC နဲ့ မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး Wi-Fi6ကိုလည်း ထောက်ပံ့ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Basic RAM အနေနဲ့ 8GB (LPDDR4X) ဒါမှမဟုတ် 12GB (LPDDR5) ပါလာမှာဖြစ်သလို 256GB Basic Storage (Pro Model) အဖြစ် ထည့်သွင်းထားမှာပါ။
သာမန်မော်ဒယ်အတွက် 8GB or 12GB RAM ၊ 128GB Storage ဒါမှမဟုတ် 12GB RAM ၊ 256GB Storage Options အနေနဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ပါမယ်။
Pro အလုံးမှာ 5,000 mAh ပါဝင်ပြီး 65W Fast Charging (Wired) သုံးနိုင်မယ်၊ Magnetic Charger သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ 18W Speed နဲ့ အားသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Black Shark3မှာတော့ 4,720 mAh Battery ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အရည်သွေးပိုင်းမှာတော့ အင်တာနက် စာမျက်နှာ Troll ခဲ့သလို Usable ဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
Black Shark3စီးရီးမှာလည်း Pro မော်ဒယ်ပါဝင်လာပေမယ့် Build Quality ပိုင်း အတူတူပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ အရောင်အနေနဲ့ Lightning Black ၊ Armor Gray နဲ့ Star Silver ရွေးနိုင်သလို Pro အတွက် Phantom Black ဒါမှမဟုတ် Armory Gray ၂ မျိုး ရွေးနိုင်မှာပါ။
64MP Main Sensor (f/1.8)
13MP Ultra-wide (f/?)
5MP Depth (f/?)
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ ရောင်းချသွားဦးမှာဖြစ်ပြီး Global အလုံးကို ကြေညာသွားမယ်။ စျေးနှုန်းတွေက 8GB/128GB မော်ဒယ်ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀ (၇ သိန်းဝန်းကျင်) ၊ Pro (8GB/256GB) ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ၆၇၅ (၁၀ သိန်းဝန်းကျင်) ကျသင့်မှာပါ။
ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့် အချိန်ကို မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့လို့ ကြေညာထားပြီး Xiaomi Sub-brand ဂိမ်းမင်းဖုန်းသစ်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ?
Source: GSMArena ၊ Android Authority